China Umgangatho oPhezulu weeVenkile eziMandla eziXabiso zeMemori kwiMemori eziPhezulu zePlagi zeWifi abavelisi kunye nabathengisi | IQHAZA
Inombolo yomzekelo I-SNW-209
Kulinganiswe ngoku 10A
Ukulawulwa kwelizwi okungenazandla: IGosund Smart plug isebenza nge-Alexa kunye noMncedisi weKhaya kuGoogle, lawula izixhobo zakho zasekhaya ngokubanika nje imiyalelo yelizwi. Yonwabela amava angenazandla, uncede ukukhathalela oomama, abantwana, abadala kunye nabo bonke abantu, lunga kwaye uzame ezi Alexa smart plugs.
Lawula izixhobo zakho naphi na nanini na: Coca izixhobo zasekhaya kwi-smart outlet, ukhuphele usetyenziso lweGosund, ulawule naphi na nge-smartphone yakho. Kwaye unokwenza iqela kuzo zonke iindawo ze-wifi kwaye uzivule kwaye uzicime ngonqakrazo olunye.
Umsebenzi wexesha kunye neShedyuli: Yenza isibali xesha elicwangcisiweyo kunye neshedyuli yokuvula ngokuzenzekelayo okanye ukucima naziphi na izinto zombane zasekhaya kunye nezinto zombane, njengokucima itshaja kwifowuni yakho egcwaliswe ngokupheleleyo, ukuseta izibane ukuba zize ngongcwalazi okanye ukucima ekuphumeni kwelanga njalo njalo. Ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nokugcina imali.
Iplagi ekhuselekileyo ethembekileyo
Ukufakwa okuKhawulezayo nokuKhawulezayo: Faka nje i-smart outlet eludongeni, uyixhume kwi-intanethi ngenethiwekhi ye-Wi-Fi (kuphela i-2.4Ghz), akukho hub kunye nokubhaliswa okufunekayo. Kwaye emva koko lawula izixhobo zekhaya ngaphandle kwefowuni kunye nelizwi lakho. Unokwabelana nolawulo nosapho lwakho kwaye wonwabe ngokulula kwikhaya eli-smart kunye.
Egqithileyo Umzi-mveliso oPhezulu oPhezulu oPhezulu loMgangatho woLawulo lweSoftware yeSoftware yePlagi yeWifi 16Amp
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu wexabiso eliphantsi kwi-Wholesale nge-State-Feedback Smart Plug Wifi US
Ixabiso leFektri yoMvelisi loMboneleli weMitha ...
Quality High Ihowuliseyili Custom Lixabiso State-Feedb ...
Ukuhanjiswa ngokuthe ngqo kwe-2 USB Ac 100-250V yePhaneli M ...